जनस्वास्थ्य वहस • nepalhealthnews.com
किन गर्छ मान्छेले आत्महत्या ? आत्महत्या गर्नेमा महिलाको तुलनामा पुरुष बढी
यही सेप्टेम्बर १० तारिख अर्थात् भदौ २५ गते नेपालमा पनि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाउने तयारी छ । आत्महत्या अर्थात् आफैले आफ्नो हत्या गर्ने काम। एक तथ्यांकअनुसार विश्वमा प्रत्येक ४० सकेन्डमा मान्छेले आत्महत्या गर्छन् । नेपालमा पनि
डा. पाण्डेलाई १० प्रश्न
हाडजोर्नी शल्यचिकित्सक डा. चक्रराज पाण्डे ग्रान्डी इन्टरनेशनल हस्पिटलका बोर्ड अफ डाइरेक्टर तथा हाडजोर्नी विभागका प्रमुख हुनुहुन्छ । २२ वर्षको अवधिमा साना–ठूला गरेर डा. पाण्डेले ४० हजारभन्दा बढी शल्यक्रिया र करिब दुई लाख बिरामीलाई ओपीडी सेवा प्रदान गरिसक्नुभएको
झण्डै एक महिनादेखि घरमा फोहर लिन गाडी नआउँदा कोटेश्वरकी चन्द्रकला फुयाँल हैरान हुनुहुन्छ । एकातिर घरमा फोहर फाल्ने ठाउँ छ्रैन, अर्कातिर घर अगाडिको फोहरको दुर्गन्ध भान्सासम्म आउँछ । “फोहर लगेको भन्दै पैसा लिन भने प्रत्येक महीना ढोकामा
संहिताले गर्दा बिरामीले दुःख पाउछन् : डा केसी
मुलुकी अपराध संहितामा भएको व्यवस्थाको कारणले गर्दा बिरामीले दुःख पाउने डा. गोविन्द केसीले टिप्पणी गर्नुभएको छ । नेपाल चिकित्सक संघले आइतबार गरेको ¥याली पछिको सभामा बोल्नुहुदै डा. केसीले संहितामा भएको व्यवस्थाका कारण डाक्टरहरु जोखिम लिन नचाहने भएकाले
बिरामी श्रीमती हेला गर्ने लोग्नेलाई एक वर्षको जेल र जरिवाना
के तपाईं कडा रोग लागेका कारण श्रीमानबाट अपहेलित हुनुभएको छ ? यदि छ भने नआत्तिनुस् । तपाईंकोको समस्याको कानुनी उपचारका लागि सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेकले प्रजनन रोगको कारण देखाइ श्रीमतीलाई
थारुलाई मात्र किन लाग्छ सिकलसेल एनिमिया, के हो खास कारण ?
मानव रगतमा पाइने रातो गोलाकार रक्तकणिकाको स्वरुप परिवर्तन भई हँसियाजस्तै आकारमा रुपान्तरण हुने रक्तअल्पता सम्बन्धि रोगलाई सिकलसेल एनिमिया भनिन्छ । सिकलसेल एनिमिया भएका बिरामीहरुको गोलाकार रक्तकणिकाहरू छिटोछिटो नष्टभई रक्तसञ्चारमा अवरोध उत्पन्न हुन्छ, जसलेगर्दा बिरामीको रगतमा अक्सिजनको
मुलुकी ऐन – चिकित्सकलाई पुरस्कार कि दण्ड ?
स्वास्थ्य क्षेत्र अत्यन्तै सम्बेदनशिल क्षेत्र हो । जनस्वास्थ्य संगको विषय भएकाले पनि सबै भन्दा मुख्य रुपमा लिइन्छ । नेपालको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने प्रत्येक दिन लगभग हजारौं जनता विरामी भई आकस्मिक कक्षमा चेकअप गर्नको लागि जाने गर्दछ
औषधि व्यवस्था विभागबाट ग्लोबल रेफरेन्स ल्याबलाई मान्यता
औषधि व्यवस्था विभागले ग्लोबल रेफरेन्स ल्याबलाई मान्यता दिएको छ । नेपालमा औद्योगिक उत्पादनका नमुना परीक्षणका लागि सहयोगी ल्याब सञ्चालन हुने क्रममा सन २०१६ देखि ग्लोबल रेफरेन्स ल्याब सञ्चालनमा आउन सफल भएको हो । यस अघि यस्तो नमुना